Goolhayaha Qaranka Seychelles Tababar ma qaato miyaa??, Warbaahinta Bulshada Saameynta uu ku reebay Aqriso!!!
Sunday, June 16th, 2019 - 20:14:26
Sunday September 09, 2018 - 10:37:44 in Wararka by Muuse Cabdi
Nigeria ayaa booqatay xulka Taagta daran ee Seychelles Ciyaar ay wada qaateen Sabtigii waxayna ka tirsaneyd ciyaartaas kulamada loogu soo baxayo koobka 2019 Africa Cup of Nations ee ka dhici doona dalka Cameroon, ciyaartu waxay ku dhammaatay 3-0 ay ku badisay Nigeria, ha yeeshee kulankaas dadka qaarkii uma aysan Daawan Natiijada.
Kulanka ayaa lagu arkay laacib qabsaday Baraha Bulshada oo lama filaan ay cid kasta ku noqotay Aragtidiisa, goolhayaha xulka Seychelles muuqaalkiisa ayaana ahaa waxa ay dadku Dareen ahaan si waalli ah indhaha ugu wadahayeen waayo Jir ahaan wuxuu u muuqday mid aan maalinna Tababar qaadan.
Durbadiiba dadka Baraha Bulshada ku xiriira ayaa waxay soo geliyeen Sawirradiisa iyadoo lasoo raacinayay Goolhayihii Cuslaa, waxa ugu weyn ee laga hadlayay wuxuu ahaa hab dhismeedka Jirkiisa dad badan oo daawaday ayaana aad u xiiseynayay.
Seychelles, ayaa kaalinta ugu hooseysa uga jirta Guruubka E, ee is reereebka Koobka Afrika, waxayna la ciyaari doonaan South Africa Khamiista soo socota, September 13-keedana ku beegan.